Plastiki Chikafu Jarvagadziri & Vatengesi | Fukang
Kumba > Zvigadzirwa > Plastiki Chikafu Jar
Chikafu chepurasitiki chirongo
BPA yemahara, chikafu chengetedzo yepurasitiki chirongo chakanakira kicheni, pantry, kana kushandiswa kwemumba kuchengetedza zvinhu zvakaomeswa, zvinonhuwira, nzungu, kuita bhinzi nzungu, kofi, chokoreti, mapundu uye zvimwe; isu tine chirongo mumhando dzakasiyana uye saizi, kubva 10oz kusvika 178oz, iyo muvharo inogona kuve epurasitiki sikuruu cap uye aluminium cap uye yakafara muromo dhizaini kuti zvive nyore kutora zvigadzirwa kubva muhari, gadzirisa logo inogona kuiswa pane chirongo kana kapu nekudhinda, kunamira chitambi kana kuputira kuputira.
F-1000A idenderedzwa chikafu chebhodhoro, muromo wakazara unogona kubata 1000 ml yemvura. Bhodhoro idzva rakasarudzika, rinoshandiswa pazvipo zveKisimusi, zvizoro, mhando dzese dzesipi, nezvimwe.
F650C kurongedza muchina
Otomatiki kurongedza kweiyo 20oz bhodhoro.
Mukanwa wakazara unogona kubata 480ml bhodhoro rechikafu chemvura, dhayamita 37mm, dhayamita yepasi 55 * kukwirira 201mm, inogona kushandiswa muto, uchi, jam uye zvichingodaro.
F-1000A idenderedzwa chikafu bhodhoro, muromo wakazara unogona kubata 1000 ml yemvura. Bhodhoro idzva rakasarudzika, rinoshandiswa pazvipo zveKisimusi, zvigadzirwa, marosi ese, nezvimwe.
F-350y pet chinwiwa bhodhoro ine chinzvimbo che350ml, iyo inonyanya kushandiswa kuputira chinwiwa, kurongedza kwemvura, nezvimwewo Saizi ye56 * 174mm inogona kuve yakagadzirirwa screw cap. Mazuva ese ekugona kugona kwe18-20 zviuru zvidimbu.
Ruoko rwe robhoti rwoga rwunobata preforms yebhodhoro, ndokuiisa munzvimbo yekuratidzira yemuchina, wobva waiendesa kumushini unofuridza bhodhoro, Zadzisa kupuruzira mabhodhoro. Bhodhoro preforms inogadzirwa neiyo jekiseni kuumbwa muchina. Kune Mumwe muforoma ine mativi mana, Muforoma imwe ine mativi matanhatu, Muforoma imwe ine masere masango. huwandu hwakasiyana hwemakomba hune zvakabuda zvakasiyana. Iwo mabhodhoro preforms anozopfuudzwa neanotakura bhandi kumhepo inovhuvhuta, uye nekufuridza, wobva waumba bhodhoro chimiro.
Yakakura chinzvimbo chakakura muromo wakachena PET wepurasitiki chikafu chekuchengetedza chirongo
Yekukurumidza Nhoroondo Nzvimbo Yekutangira: Guangdong, China Zita Rekushandisa: Fukang Muenzaniso Nhamba: F-1125A Pamusoro Kubata: Screen Kudhinda Chinyorwa Chekutanga: PET Chigadzirwa cheMuviri: PET Collar Chinyorwa: PET Simbiso Type: CHIKWANGWANI CAP Rudzi rwePurasitiki: PET Ruvara rwebhotoro: Transpanent Unyanzvi: 1125ml Kukura: Dia124mm * H102mm Nzvimbo yekwatangira: Dongguan, Guangdong Chitupa: FDA / QS Hunhu: E-co ane hushamwari Ruvara rweCap: Yero Maumbirwo: ROUND Nguva Yekubhadhara: T / T. Zita: 1.3L muromo wakakura muhombe wakajeka epurasitiki lollipop candy inotapira chirongo Industrial Use: Candy, nzungu, nzungu ruomba, lollipop zvihwitsi inotapira
Yakasarudzika Transparent Round Round Kofi chirongo NePET muvharo
Yekukurumidza Nhoroondo Nzvimbo Yekutangira: Guangdong, China Zita Rekushandisa: fukang Muenzaniso Nhamba: F-565A Pamusoro Kubata: Screen Kudhinda Simbiso Type: CHIKAMU CHEMA, Screw pamusoro lids Rudzi rwePurasitiki: PET epurasitiki chirongo ruvara: yakajeka Unyanzvi: 565ml saizi: DIA91mm * H95mm chimiro: denderedzwa Hunhu: BPA yemahara chitupa: FDA, ISO 9001 logo: kudhinda kwechidzitiro, chitambi sampu: yemahara Usage: chirongo kavha Maitiro Ekushandisa Maindasitiri: CANDY